Ny sasany amin'ireo fomba fijery tsara indrindra any Eropa dia tsy voavidim-bola ary mora azo. Na izany aza, ny dia mankany Eropa dia mety ho lafo be raha tsy mikasa mialoha. Raha manitatra ny teti-bolanao ny ankamaroan'ny renivohitra eropeana, misy toerana vitsivitsy dia lavitra any Eropa izay mora vidy tanteraka. Ny tamponay 7 ny ankamaroan'ny toerana mora vidina any Eropa dia tsara teti-bola ary tsy hihoatra ny 50 € isan'andro isan'andro.
Ireo vatosoa miafina ireo dia tsy latsa-danja lavitra amin'ny hatsarana sy majia, noho ny tanàna toa an'i Paris sy Berlin.
Ankoatry ny, ny tsangambato malaza indrindra tany Alemaina, malalaka ny katedraly Cologne mahafinaritra hitsidika. Ny maritrano Gothic, varavarankely fitaratra nolokoina, ary ny fahitana ny renirano dia epic. Raha tia kanto ianao, avy eo manana an'i Cologne tranombakoka lehibe na kanto an-dalambe mahavariana ao Ehrenfeld. Ity faritra ity dia ny faritra andilana sy lava any Cologne, ny toerana haleha ho an'ny kafe sy antitra.
Eger dia mety amin'ny faran'ny herinandro spaoro miala sasatra avy any Budapest. Ny safidy eo anelanelan'ny dia iray andro na fiatoana tanàna avy any Budapest dia anao avokoa, saingy mamporisika ny handany farafahakeliny faran'ny herinandro lava eto amin'ity tanàna mahasarika ity izahay.
eto amin'ny Save A Train, ho faly izahay hanampy anao handamina ny fialan-tsasatra amin'ny toerana mora vidy indrindra any Eropa amin'ny lamasinina.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “Toerana 7 mora vidina indrindra any Eropa” ve ianao amin'ny tranokalanao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: ny https://iframely.com/embed/https: //www.saveatrain.com% Nyawang- (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
affordabletravel budgettravel cheaptravel Repoblika Tcheky TrainTravelBelgian TrainTravelHungary travelfrance travelgermany